Walt Dohrn – Cast – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
Trolls World Tour (2020) Unicode ဒီ Animation လေးက ကလေးလူကြီးမရွေး ကြည့်သင့်တဲ့ကားလေးပါ 2016 တုန်းကထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Trolls ဆိုတဲ့ Animation ရဲ့ ဒုတိယမြောက် ဇာတ်ကားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ပထမဇာတ်ကားလေးကတော့ တော်တော်ပေါက်သွားခဲ့ပါတယ် မကြည့်ရသေးရင်ပထမကားလေးကိုလည်းကြည့်လိုက်ပါဦးနော်။ ပထမဇာတ်လမ်းနဲ့မတူ ကွဲထွက်နေတာက ဒီဇာတ်ကားမှာ Musical Genres တွေနဲ့ပတ်သတ်လို့ အယူစွဲ ပုတ်ခတ်နေတာတွေကိုရှင်းလင်းပြသထားတဲ့ပုံမျိုးပါ။ Genes တွေစုံလွန်းလို့ တော်တော်အားရစရာကြီးပါ လူမျိုးမခွဲခြား မျှတပြီး Harmony ဖြစ်တဲ့ ပုံစံလေးနဲ့ အဆုံးသတ်ထားတော့ ဇာတ်သိမ်းလေးက ပျော်စရာလေးဖြစ်နေတာပါ ဒီ trollsလေးတွေက 1959 မှာ Thomas Dam ဆိုတဲ့လူက စထုတ်တဲ့ Troll ဆိုတဲ့ plastic doll ကိုအခြေခံထားတယ်လို့လဲသိရပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အားရစရာအကောင်းဆုံးကတော့ Genres တွေပါ Timberlake ရဲ့ ဆန်းသစ်တီထွင်ကွက်တွေ အားထုတ်ချက်တွေကို တစ်ဝကြီးခံစားနိုင်မှာပါ။ Kpop နဲ့ Reggaeton တို့လို အမျိုးအစားတွေကိုပါ ပွဲထုတ်ထားတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Cast တွေကလည်း အလန်းစား music တွေကလည်း တကယ့်ဒိတ်ဒိတ်ကြဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဟာသအပိုင်းတွေ မိသားစု သူငယ်ချင်း ...
IMDB: 6.1/10 11496 votes
Penguins of Madagascar (2014) ဒီ ဇာတ္လမ္းေလးကေတာ. Skipper, Kowalski, Rico နဲ. Private join ဆိုတဲ့ပင္ဂြင္းေလးေကာင္ရဲ. စြန္စားခန္းေလးေတြအေျကာင္းပါ ဇာတ္လမ္းအစမွာေတာ့ Skipper, Kowalski, Rico တို.ဟာ Private ေမြးဖြာမဲ. ဥ ကိုကယ္တင္ခဲ့ျပီး Private ဟာ Skipper, Kowalski, Rico တို.နဲ. မိသားစု၀င္ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။ပင္ဂြင္းေလးေကာင္ဟာ နယူးေယာက္ခ္ ျမိဳ.ကိုေရာက္ရွိခဲ့ျပီး ပင္ဂြင္းေတြကို ရန္ျငိဳးျကီးေနတဲ့ေရဘ၀ဲ ေဒဗ့္က ဖမ္း သြားပါတယ္။. ေနာ.၀င္း အဖြဲ.သားေတြနဲ.ပင္ဂြင္းေလးေကာင္ ပူေပါင္းျပီး ေရဘ၀ဲ ေဒဗ္. ရဲ. ယုတ္မာမူေတြကို အတူတြန္းလွန္ရာကေန အကုန္လံုး ေရဘ၀ဲ ေဒဗ္.ရဲ.ဖမ္းဆီးျခ င္းကို ခံခဲ့ရပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ ပင္ဂြင္း အဖြဲ.၇ဲ. အငယ္ဆံုးေကာင္ေလးျဖစ္တဲ့ Private ဟာ ပင္ဂြင္း ေတြအကုန္လံုးကို ေရဘ၀ဲ ေဒ့ဗ္ လက္မွ ကယ္တင္ခဲ .ပံုကိုဟာသေတြ တပံုျကီး ...
IMDB: 6.7/10 72,723 votes